Soo dejisan Auslogics Anti-Malware 1.8 – Vessoft
Soo dejisan Auslogics Anti-Malware
Auslogics Anti-kharimibo – software ah si loo xaqiijiyo badbaadinta nidaamka ka dhanka ah hanjabaad kala duwan. Software ayaa u saamaxaaya in ay hubiso habka la noocyada scan kala duwan oo ka dib markii la dhameeyo si aad u eegto liiska hanjabaad helay kabixiso ee heer khatar ah. Auslogics Anti-kharimibo kuu ogolaanaya in aad ku dhaqaajiyaan files laga shakiyo si karantiil oo waxaa waajib ah in soo kabashada haddii loo baahdo. Sidoo kale software ah ayaaba falanqayn qoto dheer ee diiwaanka, kordhin browser iyo fayl nidaamka joogitaanka walxaha khatarta ah. Auslogics Anti-kharimibo ku jira jadwaliye dabacsan si ay ula qabsadaan iskaanka si toos jadwalka, sida ay rabitaankayga shakhsi.
Falanqaynta dhamaystiran oo ka mid ah meelaha hab oo kala duwan
Hababka kala duwan scan
Interface tayo loogu talagalay
Auslogics Anti-Malware Software la xiriira:
العربية, English, Español, Português... Microsoft Security Essentials 4.9.218